ရေခဲသေတ္တာ အမှားကြာင့် မျက်နှာမှာ ၃၈ ချက် ချုပ်လိုက်ရတဲ့ ကလေးလေး - TheeSayChin
June 10, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ဗဟုသုတများ
အိမ်မှာ ကလေးငယ်တွေ သားမီးလေးတွေ ရှိရင် ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လို မှန်မှန် ကန်ကန် အသုံးပြုရသလဲ ဆိုတာ လူကြီးမိဘတွေ အနေနဲ့ ကလေးတွေကို အချိန် တစ်ခု ပေးပြီး နားလည်အောင် သင်ပြ ထားသင့် ပါတယ် ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကလေးတွေ အတွက် ရေခဲ သေတ္တာ ဟာလည်း မျှော်လင့်မထားတဲ့ အန္တရာယ် ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ ဖော်ပြပါ သတင်းက မီးမောင်း ထိုးပြနေ ပါတယ် နော်…… ။
တရုပ်နိုင်ငံက ကလေးငယ်ဟာ ရေခဲ သေတ္တာခဲခန်း ထဲက အေးခဲနေတဲ့ အချိုရည် သံဗူး ပေါက်ထွက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့မျက်နှာ ပါပြင်ပေါ်မှာ ဟက်တက်ကြီး ပြတ်ရှသွားတဲ့ အတွက် မျက်နှာမှာ ၃၁ ချက်နဲ့ ပါးစပ် အတွင်းပိုင်းမှာ ၇ ချက် ချုပ်ခဲ့ ရပါတယ်။ အချိုရည်ဗူးဟာ ခဲခန်းထဲမှာ ၂ နာရီ ကြာလောက် ရှိနေတာမို့ ကလေးက သောက်ဖို့ ယူလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကန်ထွက်ပြီး ပေါက်ကွဲ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် … ။
တချို့ လူကြီးတွေတောင် ရေခဲ့သေတ္တာထဲ ပစ္စည်း ထားသိုပုံနဲ့ ပက်သက်ပြီး မှားယွင်းနေ ကြတာတွေ ရှိပါတယ် ။ ရေခဲသေတ္တာရဲ့ ခဲခန်းဟာ သားစိမ်း၊ ငါးစိမ်းနဲ့ ရေခဲလုပ်ဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ရေသန့်ဗူးတွေ အချိုရည်ဗူးတွေ ထားတာဟာ အင်မတန် အန္တရာယ် များပါတယ် …. ။
အထူးသဖြင့် ဘီယာ၊ အချိုရည် သံဗူးတွေဟာ အတွင်းမှာ ဂတ်စ်အတွက် နေရာ ချန်ထား ပါတယ်။ ခဲသွားတဲ့အခါ အတွင်းက ဂတ်စ်ရဲ့ နေရာကို ရေခဲက ဝင်ယူ သွားပြီး အခန့် မသင့်ရင် ပေါက်ကွဲ ထွက်တာမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ် …. ။ ဒါကြောင့်မို့ မသိ နားမလည် သေးတဲ့ ကလေးတွေကို လူကြီး မိဘေ တွအနေနဲ့ ရေခဲ သေတ္တာကို ဘယ်လို မှန်မှန် ကန်ကန် အသုံး ပြုရမယ် ဆိုတာ သင်ကြား ပေးသင့် ပါတယ် ….. ။
ရခေဲသတ်ေတာ အမှားကွာငျ့ မကျြနှာမှာ ၃၈ ခကျြ ခြုပျလိုကျရတဲ့ ကလေးလေး
အိမျမှာ ကလေးငယျတှေ သားမီးလေးတှေ ရှိရငျ ရခေဲသတ်ေတာကို ဘယျလို မှနျမှနျ ကနျကနျ အသုံးပွုရသလဲ ဆိုတာ လူကွီးမိဘတှေ အနနေဲ့ ကလေးတှကေို အခြိနျ တဈခု ပေးပွီး နားလညျအောငျ သငျပွ ထားသငျ့ ပါတယျ ။ ဒီလိုမှ မဟုတျရငျတော့ ကလေးတှေ အတှကျ ရခေဲ သတ်ေတာ ဟာလညျး မြှျောလငျ့မထားတဲ့ အန်တရာယျ ပေးနိုငျတယျ ဆိုတာ ဖျောပွပါ သတငျးက မီးမောငျး ထိုးပွနေ ပါတယျ နျော…… ။
တရုပျနိုငျငံက ကလေးငယျဟာ ရခေဲ သတ်ေတာခဲခနျး ထဲက အေးခဲနတေဲ့ အခြိုရညျ သံဗူး ပေါကျထှကျပွီးနောကျ သူ့ရဲ့မကျြနှာ ပါပွငျပျေါမှာ ဟကျတကျကွီး ပွတျရှသှားတဲ့ အတှကျ မကျြနှာမှာ ၃၁ ခကျြနဲ့ ပါးစပျ အတှငျးပိုငျးမှာ ၇ ခကျြ ခြုပျခဲ့ ရပါတယျ။ အခြိုရညျဗူးဟာ ခဲခနျးထဲမှာ ၂ နာရီ ကွာလောကျ ရှိနတောမို့ ကလေးက သောကျဖို့ ယူလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ကနျထှကျပွီး ပေါကျကှဲ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ … ။
တခြို့ လူကွီးတှတေောငျ ရခေဲ့သတ်ေတာထဲ ပစ်စညျး ထားသိုပုံနဲ့ ပကျသကျပွီး မှားယှငျးနေ ကွတာတှေ ရှိပါတယျ ။ ရခေဲသတ်ေတာရဲ့ ခဲခနျးဟာ သားစိမျး၊ ငါးစိမျးနဲ့ ရခေဲလုပျဖို့ အတှကျ ဖွဈပါတယျ ။ ရသေနျ့ဗူးတှေ အခြိုရညျဗူးတှေ ထားတာဟာ အငျမတနျ အန်တရာယျ မြားပါတယျ …. ။
အထူးသဖွငျ့ ဘီယာ၊ အခြိုရညျ သံဗူးတှဟော အတှငျးမှာ ဂတျဈအတှကျ နရော ခနျြထား ပါတယျ။ ခဲသှားတဲ့အခါ အတှငျးက ဂတျဈရဲ့ နရောကို ရခေဲက ဝငျယူ သှားပွီး အခနျ့ မသငျ့ရငျ ပေါကျကှဲ ထှကျတာမြိုး ဖွဈတတျ ပါတယျ …. ။ ဒါကွောငျ့မို့ မသိ နားမလညျ သေးတဲ့ ကလေးတှကေို လူကွီး မိဘေ တှအနနေဲ့ ရခေဲ သတ်ေတာကို ဘယျလို မှနျမှနျ ကနျကနျ အသုံး ပွုရမယျ ဆိုတာ သငျကွား ပေးသငျ့ ပါတယျ ….. ။
← အတွေးလွန်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပစ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း(၆)မျိုး
အသက် ၅နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်အား တောထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အဓ္ဓမပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား…. →